भक्तपुर नपा ९ भानेमा अस्फाल्ट प्लान्ट बन्ने : स्थानीयले गरे विरोध – indepth.com.np
२४ कार्तिक २०७७, सोमबार ०९:२०
भक्तपुर । भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका ९ भानेमा बस्तीबीचमै अस्फाल्ट प्लान्ट राख्न लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।
उनीहरुले प्लान्टबाट हुने प्रदूषणले सर्वसाधारणको जनस्वास्थ्य र वातावरणमा असर गर्ने भन्दै उक्त उद्योगलाई स्वीकृति नदिन भक्तपुर नपा ९ वडा कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएका हुन् ।
भक्तपुरका व्यवसायी नवीन प्रजापतिको नेतृत्वमा १० करोड बढी लगानी गरेर भक्तपुर नपा ९ भानेमा अस्फाल्ट प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रजापतिले जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा अस्फाल्ट प्लान्ट उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्न निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनको आधारमा कार्यालयले भक्तपुर नपा ९ वडा कार्यालयलाई स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का गरेर पठाउन पत्राचार गरेको थियो ।
उद्योग कार्यालयको पत्राचारअनुसार वडा कार्यालयले गएको असोज २८ गते स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का गरेको जनाएको छ । उक्त सर्जमिन मुचुल्का उठाउन गएपछि मात्रै स्थानीयले आफ्नो घरअगाडि अस्फाल्ट प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी प्राप्त भएको स्थानीय विक्रम लाखेले बताए ।
भक्तपुर नपा ९ वडा कार्यालयले दिएको सिफारिसपत्र ।
स्थानीय बासिन्दाले वडा कार्यालयमा दिएको निवेदन ।
उनका अनुसार वडा कार्यालयले सर्जमिन गर्दा स्थानीय बासिन्दालाई सहभागी नगरी प्लान्ट सञ्चालन हुने जग्गाका साँधसंधियारलाई मात्रै सहभागी गराइएको थियो । जुन साँधसंधियार सबै उक्त प्लान्टका लगानीकर्ता रहेको उनी बताउँछन् ।
व्यवसायी प्रजापतिले हाल भक्तपुर नपा ९ साविक भक्तपुर नपा १ कित्ता नं. १३० मा अस्फाल्ट उत्पादन गर्ने प्लान्ट राख्ने उल्लेख गरी उद्योग कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा उद्योगस्थल तोकिएको कि.नं. १३० को पूर्व र दक्षिण हनुमन्ते खोला, पश्चिम कि.न. १२९ र १३१ गरी चार किला उल्लेख गरेका छन् । उद्योग स्थल रहने जग्गाको क्षेत्रफल करिब २ रोपनीमात्रै रहेको छ । जबकि प्लान्टको लागि करिब १७ रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख गरिएको स्थानीय बताउँछन् ।
उनीहरुका अनुसार चार किलाभित्र जनाइएको जग्गासमेत प्लान्टभित्रै समावेश गरिएको छ ।
‘प्लान्टभित्रै पर्ने जग्गाका धनी एवं प्लान्टकै लगानीकर्तालाई साँधसंधियार मान्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’, स्थानीय लाखेले प्रश्न गरे ।
उनी प्लान्टभित्रै पर्ने जग्गा र जग्गावालालाई चारकिला मानेर गरिएको सर्जमिन मुचुल्का नै वैध हुन नसक्ने जिकिर गर्छन् । स्थानीयलाई थाहै नदिई वडा कार्यालयले गुपचुप सर्जमिन मुचुल्का उठाइएको अर्का स्थानीय जीवन बासीले आरोप लगाए ।
‘वडा कार्यालयले प्लान्टका लगानीकर्ताहरुमात्रै राखेर गुपचुप सर्जमिन मुचुल्का उठायो’, उनले भने, ‘नत्र स्थानीय बासिन्दालाई सर्जमिन मुचुल्काबारे किन जानकारी दिइएन ? किन हस्ताक्षर गराइएन ?’
आफूहरुको निवेदनलाई लत्याएर वडा कार्यालयले सर्जमिन मुचुल्का उद्योग कार्यालय पठाएपछि स्थानीय आइतबार घरेलु कार्यालयसम्म विरोध गर्न पुगे ।
वडा अध्यक्ष रवीन्द्र ज्याख्वले स्थानीयको विरोधकै बीच कार्तिक १३ गते उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी सर्जमिन मुचुल्का र सिफारिस पत्र पठाएका थिए ।
स्थानीय बासिन्दाले आफूहरुले विरोध गर्दागर्दै भक्तपुर नपा ९ वडा कार्यालयले उद्योग स्थापनाको लागि सिफारिस गरेको भन्दै घरेलु कार्यालयलाई बस्तीबीच उद्योग सञ्चालन गर्ने स्वीकृति नदिन ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
उनीहरुले चारैतिर बस्ती हुँदाहुँदै अस्फाल्ट प्लान्ट स्वीकृति दिए उद्योग चल्न नदिइने चेतावनी दिए ।
‘बस्तीबीच प्रदूषणमूलक उद्योग चलाउन पाइँदैन’, स्थानीय जीवन बासीले भने, ‘स्थानीयको विरोध हुँदाहुँदै स्वीकृति दिए उद्योग चल्न दिँदैनौं ।’
घरेलु कार्यालयका प्रमुख सुवोधकुमार साहले प्रक्रिया पूरा गरेर आएको उद्योग दर्ता गरिने जानकारी दिए ।
तर स्थानीयले विरोध गरेको आधारमा उद्योगस्थलमा सर्वपक्षीय एवं सर्वदलीय बैठक राखेर सहमतिअनुसार कार्यालय अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे ।
प्रदूषण हुँदैन : सञ्चालक प्रजापति
यता प्लान्ट सञ्चालक नवीन प्रजापतिले भने आफूले राख्न लागेको अस्फाल्ट प्लान्टबाट कुनै प्रदूषण नहुने दावी गरे ।
उनले आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया र युरो ३ मापदण्ड पूरा गरेरमात्रै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिए ।
‘हामीले विद्युतबाट चल्ने अटोमेटिक अस्फाल्ट प्लान्ट सञ्चालन गर्न लागेका हौं’, व्यवसायी प्रजापतिले थपे, ‘कोइला वा दाउरा बाल्ने होइन । त्यसैले कुनै किसिमको धुँवाधूलो हुने वा प्रदूषण हुँदैन ।’
उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न नै बाँकी भएकाले अहिल्यै विरोध गर्नुपर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।